एमसीसीको विरोधमा कविकलाकार जुटे - Lekhapadhi पढ्न छुटाउनु भयाे की ! : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
एमसीसीको विरोधमा कविकलाकार जुटे
लेखक : लेखापढी २७ मंसिर २०७८, सोमबार १८:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मंसीर २७ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरुद्धमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपालले आज शान्तिवाटिका, काठमाडौंमा विरोध कार्यत्रमको आयोजना गर्यो ।
प्रगतिशील लेखक संघका उपाध्यक्ष गोपीरमण उपाध्यायको अध्यक्षतामा सम्पन्न विरोध सभाको सञ्चालन महासचिव समीर सिंहले गर्नुभएको थियो । संघका उपमहासचिव आरसी न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको समारोहमा सल्लाहकार प्रा.डा. पशुपतिनाथ तिमिल्सिनाले समेत आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले एमसीसीको विपक्षमा आफनो सशक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
समारोहमा प्रगतिशील लेखक संघका केन्द्रीय सल्लाहकार डा. पुष्करराज भट्ट, राष्ट्रिय परिषद सदस्य वैरागी जेठा, राष्ट्रिय परिषद सदस्य डा.कौशिला रिसाल, मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष शान्ति प्रियवन्दना, सुर्खेतका कावा अध्यक्ष जागेश्वर गौतम, साहित्यकार सुशीला शर्र्माले कविताका माध्यमबाट एमसीसी नेपाल राष्ट्रका लागि हानिकारक भएको र यसलाई फिर्ता लग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेको थिए ।
कार्यक्रममा प्रगतिशील लेखक संघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य हेमराज आश्रमले गीतमार्फत एमसीसीबाट होसियार हुनुपर्ने सन्देश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
जनमत वाङ्मय प्रतिष्ठानद्वारा जनमत सम्मानको घोषणा
केटाकेटी अनलाइनमा कार्यरत दृष्टिविहीन पत्रकार सरिता अर्याल पुरस्कृत